What is Linux ?- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
Could you pls tell me about ubuntu server ? because i'm very interesting ubuntu especially i want to get the ebooks and about your letter in "Personal Computer Magazine"
ကို Box 02 ကို အဲဒီလို မမြင်စေချင်ပါ။ ကျနော် ဖြစ်သွားတာက ဒီ Thread ကနေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကို Box 02 ကိုထိခိုက်သလို ဖြစ်ရင် အနူးအညွန့် ထပ်မန်၍ တောင်းပန်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ။ ကျနော်က Linux ဆိုရင် Linux လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ Linux အကြောင်းပြောရင် Linux ကိုပဲ မျက်စိထဲ မြင်ပြီးပြောတာပါ။ Linux သုံးသူများ။ Linux ချစ်သူများကိုပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစာရေးနေတာနဲ့တလက်စတည်း ပြောချင်တာက တော့ အပေါ်မှာ ဘော်ဘော်တို့ ထင်နေကြသလို Istein ဒီ Thread ကြောင့် စိတ်ဆိုးပြီး ကလေးစံစံ လုပ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကလေးစံနေတာ Istein ဆီ ဆဲစာတွေ email လိပ်စာ အများကြီးသုံးပြီး ပို့နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထင်လွဲနေမှာစိုးလို့ ဝင်ပြောတာပါ။ အမှန်တော့ ဒီလိုကလေးကလား ကိတ်စတွေ Forum ပေါ် မတင်ချင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကို Box 02 လဲ ကျနော့ကိုနားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုIstein ကိုအီးမေးလ်တွေပို့ပြီး အနှောက်အယှက်ပေးတာခံနေတာကို ကြားရတာ စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဗျား။ :2:
ကိုIstein .. အေးဆေးပါဗျား၊ ရပါတယ် တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဗျား။ :67:
စိတ်မကောင်းပါဘူ းကိုအိုင်းစတိုင်းဆီ စာတွေရောက်တယ်ဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာတာကို ကျွန်တော် ဂျစ်ပဆီလေး မှ ပြန်လည် ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျား
တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ ..... ဒါပေမယ့် ကိုအိုင်ကြီးပြန်လာတဲ့အတွက်၀မ်းသာပါတယ် ... သူတို့ဆဲတိုင်းထွက်မယ်ဆိုရင် ကိုအိုင်းစတိုင်းညံ့တာပေါ့ :68:.... ကိုအိုင်းစတိုင်းမှန်ပါတယ်... :65:စေတနာနဲ့ပြောခြင်းပါဗျာ :6:
အကိုတို ့ရေ.. ပရိတ်သတ်တော့စုံနေပြီ... ဘယ်တော့ ကမှာလဲ.. အခုဟာက.... ဇာတ်ပွဲရဲ ့နောက်ကပြောနေတဲ ့အသံတွေပဲကြားနေရတယ်... လိုက်ကာကြီးကတော့ပွင့်မလာသေးပါလာဗျာ... ကျွန်တော်ကတော့ what is linux? ဆိုတဲ့ဇာတ်ပွဲကြီးကိုပဲ ကြည့်မဲ့၊ သင်ယူမဲ့ပရိတ်သတ်ပါ။။။။ ကျွန်တော်လို သင်ယူချင်တယ်လူတွေလည်း သိချင်လို ့စောင့်နေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ ့့့ထွေလာတွေပဲတက်လာတယ် စိတ်ညစ်တယ်...:((:((:(( ကိုsaturngod ရေ... ဆက်သင်ပေးပါ။။။ ထွေလာတွေ ့မကြည့်ချင်ပါ။။ အမှားပါရင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်.. :77::77::77:Topic ချော်သွားမည်ကို စိုးရိမ်လို ့ပါ။။။:77::77::77:
အရှေ့မှာ ကို TweetyCoaster ပြောတဲ့ စာအုပ်လေးကို download ချ ဖတ်ကြည့်ပါ။ တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် Linux စကာစကလည်း အဲဒီစာအုပ်လေးကို အမြဲဖတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ Thread ကြောင့် စိတ်ဆိုးပြီး ကလေးစံစံ လုပ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကလေးစံနေတာ Istein ဆီ ဆဲစာတွေ email လိပ်စာ အများကြီးသုံးပြီး ပို့နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထင်လွဲနေမှာစိုးလို့ ဝင်ပြောတာပါ။ အမှန်တော့ ဒီလိုကလေးကလား ကိတ်စတွေ Forum ပေါ် မတင်ချင်ပါဘူး။
မောင်ရင် Istein စကားလုံးလေးတွေခိုက်တယ်ကွာ။ မအိက တော့ မိန်းမနည်းနဲ့ဘဲ ဒုတ်ခပြန်ပေးလိုက်တာဘဲ။ ပေါက်ကရ site တွေသွား register လုပ် email ကြတော့မုန်းတဲ့လူ email ထည့်ပေလိုက်တာဘဲ၊ :39::39: site များများမှာregister များများသာလုပ်ပေးလိုက်:)):)):))
ဟီး... ရှင်းပေတော့ အမှိုက်တွေ၊
Linux နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသိသေးသူ မတတ်သေးသူတွေ မကြာဘူးသေးသူတွေ နားလည်အောင် ရှင်းပြရအောင် ဒီ thread ကို ဖွင့်လိုက်တာပါ။
အခုလို Linux နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီ post ကို စတင် ပေးတာကို ကျေးဇူးပါ saturngod ။ ပြီးတော့ Box2 နဲ့ အခြား ဖြေရှင်း ပေးသူလည်း ပါပါတယ်။ တကယ်တော့ Linux ဟာ Security ဘက်မှာအားသာချက် တွေရှိပါတယ်။ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
ကျွန်တော်လည်း ကိုစေတန် အဆွယ်ကောင်းလို့ ubuntu ကို သုံးဖြစ်ပါတယ် linux ပဲပေါ့ သူက gnome ကိုသုံးထာတယ်ဆိုပါတယ် ... တော်တော်တော့ ဒီဇိုင်းကောင်းတာဗျ ... ဒါပေမယ့် ခက်တာက သူ့မှာ ပါတဲ့ Graphic Design လို ဟာမျိုးတွေကျတော့ Windows က ဟာတွေလို မဟုတ်ဘူး developer တွေက အလကားပေးရတာ မို့လားမသိဘူး ကလေးကစားစရာတွေလိုပဲဗျ ... အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး Windows ပဲ ပြန်သုံးဖြစ်တော့တယ် ...ကျွန်တော်သိတဲ့ Linux က User Level ပဲ ရှိပါတယ် .... ဘာပဲပြောပြော Windows ပဲ .... ငှဲငှဲ
linux ပဲပေါ့ သူက gnome ကိုသုံးထာတယ်ဆိုပါတယ် ... တော်တော်တော့ ဒီဇိုင်းကောင်းတာဗျ ... ဒါပေမယ့် ခက်တာက သူ့မှာ ပါတဲ့ Graphic Design လို ဟာမျိုးတွေကျတော့ Windows က ဟာတွေလို မဟုတ်ဘူး developer တွေက အလကားပေးရတာ မို့လားမသိဘူး ကလေးကစားစရာတွေလိုပဲဗျ ... အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး Windows ပဲ ပြန်သုံးဖြစ်တော့တယ် ...ကျွန်တော်သိတဲ့ Linux က User Level ပဲ ရှိပါတယ် .... ဘာပဲပြောပြော Windows ပဲ .... ငှဲငှဲ
ကိုphpcrazy .. Linux ဟာ Windows မဟုတ်ဘူးဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ မမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အောက်မှာ ကျနော်တင်ပေးတဲ့ Linux is not Windows ဆိုတဲ့ article လေးကိုဖတ်စေချင်တယ်။
အဲဒီ article ထဲက စာသားလေးတချို့တင်ပေးမယ်။
"In the Linux world, however, this is not so much the case: Projects frequently start out as one man's toy. He does everything himself, and therefore the interface has no need of any kind of "user friendly" features: The user knows everything there is to know about the software, he doesn't need help. Vi isagood example of software deliberately created forauser who already knows how it works: It's not unheard of for new users to reboot their computers because they couldn't figure out how else to get out of vi."
အဲဒီလိုမျိုုးသာရေးပေးလို့ကတော့ သိန်းတစ်ရာပေးတောင် ဘယ်သူမှဖတ်မှာမဟုတ်ဘူး .. ကျွန်တော် က အစ်ကို့ကို ခင်လို့ပြောတာ ...step by step သေချာရှင်းပြပေးရင်တောင် သိပ်အလေးထားကြတာဟုတ်ဘူး..တကယ်ခင်ဗျ .. အခုခေတ်မြန်မာကလေးတွေက စာဖတ်ပျင်းတယ် ..
ကျနော်သိပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်က အသင်း၀င်အသစ်လဲဖြစ်တယ်။ ခုမှလာပြီး Linux အကြောင်း Open Source Software အကြောင်းလာပြောနေတဲ့သူ၊ ဘယ်သူနဲ့မှလဲရင်းနှီးအောင်မနေတက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ လူတွေ ကျနော့်ကို ခင်ချင်တာထက် ချဉ်ချင်တာများမှာပဲနော်။
ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ခင်တာ မခင်တာထားပါ။ နောက်ပြီးရင် အချိန်တန်တော့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားရတာပါပဲ။ တွေ့တုန်းခဏ ကိုယ်သိတာလေးတွေ သူတို့လဲသိကြပါစေဆိုပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူများအမုန်းခံပြီး ရေးနေရတာ တကယ်တော့ pain ပါတယ်။ ကျနော်ကလဲ ခင်ဗျားတို့ကို Linux လို Software မျိုးကို သုံးစမ်းပါလို့ order system နဲ့ ခိုင်းနေတာမဟုတ်ပါ။ မကြိုက်ရင် မသုံးပါနဲ့။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်သုံးဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
ကျနော် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စေတနာကိုနားလည်ပါတယ်ဗျား။ :67:
MZ ကလူသစ်တွေဆိုရင် ၀ိုင်းဆရာလုပ်ပြီး ၀ိုင်းအုပ်တတ်တဲ့ site မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ
အခုမှ စ member ဖြစ်တာနဲ့ ဆရာ မလုပ်ရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ .. member ဖြစ်တာကြာပြီ ဘာမှ မဆွေးနွေးနိုင်ပဲ ဂိနေတာတွေအများကြီး ဗျ.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲပါပါ တယ်
php နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အခုတလောသိပ်မပြောဖြစ်ဘူး..
linux နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးပြောရင် .. အစ်ကိုပြောတာတွေကောင်းတယ်...knowledge ကိုသာ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် မပေးနဲ့ပေါ့ဗျာ ..
" ဂါထာပေး တေးဖြစ်တယ်တဲ့ "
I know exactly Linux is not the windows. But they are the Operating Systems. Operating Systems can only based on the same concept something like file browsing, file copying, networking, and so on. No No, I don't want to argue about Linux Vs Windows. I only want to highlight about their application. I like Linux Interface like Ubuntu but I'm not much impress about their software like graphic design suit. Not linux, not windows, just only for their application. You got it?
I only want to highlight about their application. I like Linux Interface like Ubuntu but I'm not much impress about their software like graphic design suit. Not linux, not windows, just only for their application. You got it?
အဲလိုလုပ်ပါ.. မဟုတ်ရင် လူတွေမြင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ၊ ရောထွေးပြီး သူတို့နားလည်သွားလိမ့်မယ်။
ကိုphpcrazy ပြောတဲ့ graphic design suit ဆိုတာက ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလဲ ခင်ဗျ။
GIMP ကိုပြောတာလား ဒါမှမဟုတ် တခြား application ကိုပြောတာလား၊ ကျနော်လေ့လာကြည့်ချင်လို့ပါ။ ကိုphpcrazy ပြောတဲ့ ကလေးကစားစရာတွေလိုပဲဆိုတာ application ကို ကျနော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ချင်လို့ပါ။ စိတ်၀င်စားပါတယ်။
Good Tip ပါ ကိုemo .. ကျေးဇူးပါ။ ကျနော် အတက်နိုင်ဆုံး စိတ်၀င်စားအောင် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်က အချိန်တိုအတွင်းမှာ အလျှင်အမြန် reply လုပ်လိုက်ရလို့ပါ။
တစ်ခါတလေ ကျနော်တွေးမိတယ်၊ တချို့လူတွေမှာ internet လဲ 24/7 မသုံးနိုင်ဘူး၊ နောက်ပြီး ဒီ Linux ဆိုတဲ့ဟာကလဲ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး၊ မြင်ဖူးတယ်ထားအုံး screenshots ဘာညာစသည်ဖြင့်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် စမ်းကြည့်ဖို့ အခွင့်အရေးလဲနည်းတဲ့သူတွေအတွက် "ကျွဲပါး စောင်းတီး" နေသလို ဖြစ်နေမှာပဲနော်။
I like Linux Interface like Ubuntu but I'm not much impress about their software like graphic design suit. Not linux, not windows, just only for their application. You got it?
ကို phpCrazy က ဒါကိုပဲ ဆိုလိုတာပါ။(ထင်တာပဲနော်:D:D:D):):):)
GIMP also can't compare with Illustrator or some other graphic applications. I also tested so many application which are available at Ubuntu, but I don't like them at all. But I also agree with it is good to use as Web Server and security features are better than Windows Server. I only have experience with Unix Hosting because it is cheap. I can't afford to buy Windows Hosting.
No no no, not like that. Buffalo can't understand the music. Buffalo can't also understand the Linux too. But I would like to request you to extract more clarification of your post. All written in English can't give us deep understanding. Moreover, we have no chance to test the Linux as well. That's why we can't understand the Linux very well. Just only "can't" because we have no chance. If we have chance to study Linux, we can understand Linux for some extent, not like buffalo. Yes, we can! (like Obama ) Okay? But I also admit that we all are lazy at reading English. That's one of the main weaknesses of ours. I also would like to request you, emo, you should also try to read! Okay, Cheer! Let's learn together!
ဆရာတစ်ယောက်ဆီကို စင်္ကာပူက တပည့် တစ်ယောက် အလည်လာရင်း ဝင်ပြီး နှူတ်ဆက် ကန်တော့တယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီတပည့် ကဆရာကြီးကို ဘာပြောလဲ ဆိုတော့ "ကျနော်တို့ မြန်မာတွေလဲ၊ တော်တော်ပျင်း၊ တော်တော်အသုံးမကျကြပါဘူး" လို့ပြောတယ်။ ဒီစကားလေးကို ဘဝင်မကျတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးက ရေးထားတယ်။ အနှီသကောင့်သားသည် လည်း မြန်မာပြည်သားမဟုတ်ပါလော ဟုဆရာကြီးကပြောသည်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မင်းမကောင်းဘူး၊ မင်းညံ့တယ် လို့ပြောနေကြရင်တော့၊ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်သွားကြမှာပဲလေ။
မကောင်းတာ ပြောဖို့ဆိုရင်၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဆိုတဲ့ အများကိန်းမထည့်နဲ့။(အကယ်လို့ သန်း၆၀ လုံးကိုလိုက်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် တော့ထည့်ရင်ထည့်လေ။)
ကိုယ်ကသိပ်ကောင်းနေတယ်။ သိပ်တော်နေတယ်။ ကိုယ်နဲ့ မတန်ဘူးဆိုရင် ထွက်သွားလိုက်၊ လှည့်ကြည့်မနေနဲ့၊ ဝေဖန်မနေနဲ့။ အဲဒါအကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်လူတွေကို စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ပေးရမယ့် အချိန်။ ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေတာကို အလိုမရှိဘူးခင်ဗျ။
အရမ်းသဘောကြပါတယ် ။ရေးသားချက် ကိုခိုက် တွားပြီ ။ :41:
အပေါ်မှာရေးထားတာတွေ ဖတ်ပြီးတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်။ Window & Linux ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးချင်ရင် Post Title ကိုချိန်းလိုက်ကြပါ။ ဖိုရမ် အုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့လဲ ဒီလိုသာ ပျော့ညံ့ညံ့ ကိုင်တွယ်နေရင် နောက်ရေရှည်မှာ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမှာလဲ။ Topic ချော်နေရင် တည့်ရမှာ Admin တွေ Mod တွေရဲ့တာဝန်ပါ။ ကိုယ်တွေ ကိုယ်တိုင်ကဝင်ချော်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ ? အုပ်ချုပ်သူရာထူးယူထားတယ် ဆိုထဲက ပြက်သားစွာကိုင်တွယ်နိုင်ရပါမယ်။ ဟိုလိုလေး ဟိုလူကရေးသွားရင် မှန်တယ်ပြောလိုက်၊ ဝင်ညင်းလိုက်၊ ဒီလိုလေးပြောရင် မှန်တယ်ပြောလိုက် ဝင်ညင်းလိုက်ဆိုရင် ? Topic ဆိုတာ ချော်ရင် ဖျက်တန်သည်ဖျက် ရွှေ့တန်သည်ရွှေ့ရပါမယ်။ ဖျက်လိုက်လို့ မျက်နှာပူစရာမရှိပါဘူး။ Off-topic ဆိုတဲ့ Thread တခုထားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ချော်စရာ ညင်းစရာဆိုရင် အဲ့ဒီကို ရွှေ့သွားယုံပါပဲ။ Old Member တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမြင်မတော်လို့ဝင်ပြောပါတယ်။ MZ Forum ကြီး စနစ်တကျ ငြိမ်းချမ်းစွာ ရှေ့ဆက်စေချင်တဲ့စေတနာပါ။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Topic တွေလွဲချော်နေပြီ။ ဒီ Topic ကို ကျွန်တော်စခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာမှာ Linux အကြောင်းပဲပြောရအောင်။ windows ကိုခဏမေ့ထားလိုက်ရအောင်ဗျာ။ Linux ကို သိလိုတဲ့ လူငယ်တွေအများကြီးပါ။ Linux ကို စသုံးနေတဲ့ လူတွေလည်း အများကြီးပါ။ သူတို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကောင်းမကောင်းကိစ္စထက် Linux ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို ပဲသွားရအောင်။
လူချောလေး အိုင်းစတိုင်း ရွှေ့ထားပါတယ် ကိုတက်လူရေ..
Topic ချော်နေတာ ကျနော်တို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဖိုရမ်ထဲမှာတွေ့ ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေရှိသင့်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မဆွေးနွေးပဲ .. မူလတန်းကျောင်း အလယ်တန်းကျောင်းမှာလို ဆရာဆရာမပြောတာလိုက်နားထောင် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့နဲ့ နောက်တော့ နကန်းတလုံးမှ မသိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံနေရတာ ခင်ဗျားအသိပဲ။ ဒီလို interactive လေးဖြစ်နေရမယ်လေ။
ကိုယ်မကြိုက်တာ ကိုယ်နားမလည်တာပြောမှ ပိုပြီးရှင်းလင်းမှာပေါ့။ ဒီလိုဆွေးနွေးတာ ဒီ topic လွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဆက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။
ခင်ဗျား admin, mod တွေရဲ့ သဘောထားပြည့်၀မှုကို မတွေ့ဘူးလား ခင်ဗျာ။
ခင်ဗျားကမှ admin, mod တွေရဲ့ သဘောထားပြည့်၀မှုကို မတွေ့တာပါ။
ကျွန်တော်တည့်တည့်မပြောချင်တာကို လာဆွ တာကိုး။ ဖိုရမ်မှာ ဆွေးနွေးညင်းခုံကြတာကို ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Topic ချော်တာနဲ့ တခြားစီပါ။ ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ပြောထားသလိုပဲ Window နဲ့ Linux ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးချင်ရင် Post အသစ်တင်လိုက်ပါ။ ဆွေးနွေးချင်သူတွေ လာဆွေးနွေးကြမှာပါ။ ခုဒီ Topic Title ကဘာလဲဆိုတာလဲပြန်ကြည့်ပါဦး။ Linux ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့လူတွေအတွက် ဖွင့်ပေးထားတာပါ။ ဒါကိုအကိုသဘောပေါက်ရင် ရပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆွေးနွေး ညင်းခုံမှူနဲ့ Topic ချော်တာကို နားမလည်သေးဘူးလို့ပဲမှတ်ယူပါတယ်။
PS: စာသားလေးတွေ ပြန်ပြင်လိုက်တဲ့အတွက် ဖတ်ရအဆင်ပြေသွားပါတယ်။
အစ်ကိုလည်း စိတ်လျော့ပါ။ ကိုတက်လူလည်း စိတ်လျော့ပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့တွေ အနေနဲ့ အခုလက်ရှိ Linux ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကိုပဲ ရှေ့ဆက်ရအောင်။ Linux အကြောင်းပဲပြောရအောင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလည်း ဘယ် Linux ပိုကောင်းလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးရအောင်။ ဒါမှ ဘယ် Linux ကို ဘယ်လိုဆိုတာ သိလာမှာလေ
လမ်းကြောင်းအမှန်လေးပေါ်လာအောင် ကျွန်တော်စပြီ အားပေးလိုက်ပါတယ်.... MZ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးဖြေရှင်းပေးကြပါကုန်....:77::77::77:ကျွန်တော် Fedora linux စပြီစမ်းတင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ.. ဒီလို error box ကြီးကျလာပါတယ်..ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါ။
ကို saturn ပြောတာကို ကျွန်တော်လည်း ထောက်ခံပါတယ်။ အစပိုင်းကတော့ ပညာရပြီဆိုပြီးပျော်နေတာ အခုတော့ . . .
ကျွန်တော်က linux ကို မတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လို မတတ်တဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောင်ပြီး ဆက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးပေးကြပါနော်။ :77: :77: :77:
screenshot က အရမ်းသေးလွန်းတယ်၊ ကျနော် မမြင်ရလို့၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အရွယ်အစားချဲ့ပြီး ပြန်တင်ပေးပါ ခင်ဗျာ။
ဖြစ်နိုင်တာက installer media (cd or dvd) ကို burn တုန်းက မပြည့်စုံခဲ့တာ။ ဒါမှမဟုတ် downloaded iso က checksum နဲ့လွဲနေတာမို့လို့ cd dvd burn တဲ့အခါ မပြည့်စုံတဲ့ files တွေရပြီး installation မှာ error တက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
ဟာဗျာ ... Linux အကြောင်း ပြောရင် Windows မပါလာစရာ အကြောင်းမှမရှိတာဗျ ... ဘယ်နားက တော့ ပစ်ချော်သွားလို့လဲ ... Winodws အကြောင်း ပြောလိုက်ရင် Linux သမားတွေ တီကောင် ဆားထိသလို ပြန်ပြန်အော်တတ်လို့ တမင်ဝင်ပြောတာဗျ ... အမှန်က ဆွေးနွေးမှုဆိုတာ ဒီလို ဒါဏ်ခံနိုင်မှ ဖြစ်မှာလေ ... ဘာတော့ပစ်ခေါ်တာလဲ ... Linux နဲ့ Windows ယှဉ်ပြောတယ် ဆိုတာကာ Linux အကြောင်း ပဲ မဟုတ်လား ... ကျွန်တော်က တမင်ဝင်ဆွတာဗျ ... ပြောရင် BraimStrom ဆိုတဲ့ သဘောပဲ ... ဘာဖြစ်တုန်း Windows အကြောင်းပြောတော့ ... Linux ကို Windows နဲ့ ယှဉ်ပြီး သိတော့ မကောင်းဘူးလား ... ဘာမှ ချော်တောငေါ့စရာ အကြောင်းမရှိဘူး ... OS အကြောင်း ပြောရင် Winodws လည်း ပါလာနိုင်သလို Mac လည်း ပါလာမှာပဲ ... ကိုရင်တို့ တော့ပစ်ချော်တယ်ဆိုရင် အကြောင်းပြချက်လေးတော့ လုပ်ပေါ့ ... ကျွန်တော်က တမင် ဝင်ဆွတာဗျ ... တီကောင်တွေကို ဆားနဲ့ ထိသလို သိပ်တွန့်တတ်ကြလို့ ... ငှဲငှဲ ... ကျွဲတွေကို စောင်းတီးတာလောက် မလုပ်နဲ့ဗျာ .. ဒီဂျေလေး ပွတ်ပြပေါ့ ... ဟုတ်ဘူးလားဗျာ ...
Off Topic မဟုတ်သည့် အတွက် ဖျက်စရာမလိုဟုထင်၍ မဖျက်ပါ.. ရေးထားတာတွေ ပြန်ကြည့်ပါ
(၁) Windows လို Linux က Software တွေ မစုံပါ ဟု တစ်ယောက်က ပြောပါသည်။ Linux အကြောင်း ပါနေပါသည်။
(၂) အင်္ဂလိပ်စာတွေ အများကြီးရေးထားသည့် အတွက် နားမလည်ပါဟု ပြောပါတယ် တော့ပစ်မချော်ပါ။
(၃) ကျွဲပါးစောင်းတီးဟုပြောပါသည် ... ကျွန်တော်က ကျွဲပါးဒီဂျေပွတ်ပါဟု ပြောပါသည် တော့ပစ်မချော်ပါ ဒါကြောင့် ဖျက်စရာမလိုပါ ...
ကျနော့်ကို တီကောင်းလေးလို့ပြောရင် ကိုphpcrazy လဲ ကျွဲကြီးဖြစ်မှာပဲဗျ
ကျနော့်ကို ဆားနဲ့မတို့ခင် ဒီဂျေလေး ပွတ်ပြလိုက်အုံးမယ် ဘယ်ရမလဲ :P :67:
ကျနော့်ကို တီကောင်းလေးလို့ပြောရင် ကိုphpcrazy လဲ ကျွဲကြီးဖြစ်မှာပဲဗျ :d
ကျနော့်ကို ဆားနဲ့မတို့ခင် ဒီဂျေလေး ပွတ်ပြလိုက်အုံးမယ် ဘယ်ရမလဲ :67:
ကျွန်တော် အဲဒီလောက် အသားမမည်းပါဘူးဗျာ ... မယုံရင် ကိုစေတန့်ကို မေးကြည့် ... :d
ဟားဟား ဟုတ်ပါ့ ကိုစေတန်နဲ့ online မှာတွေ့ရင် မေးလိုက်အုံးမယ်။ ယုံဘူး :67:
ဟားဟား ဟုတ်ပါ့ ကိုစေတန်နဲ့ online မှာတွေ့ရင် မေးလိုက်အုံးမယ်။ ယုံဘူး :d :67:
ဖြူပါတယ်.... အဲ... အခုတော့ နည်းနည်း ညိုသွားတယ်.. :d
ဟားဟား ကိုစေတန်ထောက်ခံပေးလို့ ယုံလိုက်ပြီနော် :d
နည်းနည်းညိုသွားတာကတော့ စဉ်းစားစရာပဲနော် .. နေပူကြီးထဲသိပ်မသွားနဲ့နော်
linux နဲ့ window အကြောင်းကြီး ပဲး ေြ့ပား နေတော့ mac လေးမျက်နှာ ငယ်တာပေါ့။ mac အကြောင်းပြောမယ် လူတယောက် နှစ်ယောက်လောက် လာပါ အုံး ။ ရှင်ပြောလိုရတာ ပေါ့။ အနော်တော့ ပါဘူးနော် :P။တားတားကဘားမ မသိဘူး ။
လက်ရှိ အသုံးပြုနေတာကတော့ Ubuntu 8.10 ပေါ့။ Gnome နဲ့ DEB package ကိုအသုံးပြုထားတယ်။ Gnome ဆိုတာကတော့ GUI ပေါ့။ Linux မှာ နာမည်ကြီး GUI တွေ့တော့ GNOME , KDE , Xcf တို့ပါပဲ။ အများအားဖြင့် GNOME ကိုအသုံးပြုကြတယ်။ တချို့တွေကလည်း KDE က ပိုလှတယ်။ ပိုသုံးကောင်းတယ်ပြောတယ်။ Xcf ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာ။ Package ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်သိတာ ဆိုလို့ RPM နဲ့ DEB ပါ။ သူတို့က windows မှာ installation သွင်းတဲ့ file တွေသဘောပါပဲ။ .msi ,setup.exe လိုမျိုးလို့ ဆိုလို့ရမယ်ထင်တယ်။ RPM ကတော့ fedora မှာအသုံးပြုပြီး DEB ကတော့ Ubuntu မှာအသုံးပြုပါတယ်။
မှာ ဘာ package base အသုံးပြုထားတာတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါတွေတော့ မသိဘူးဗျ။ ကျနော်သုံးတာက wubi installer 8.10 တဲ့။ ကျနော် ကွန်မန်း အသုံးပြုရတာနဲ့ မရင်းနှီးတော့ တိုင်ပတ်နေတယ်ဗျ။ လောလောဆယ်တော့ ပါလာတဲ့ဟာတွေပဲ သုံးတယ်။ ဘာမှ ထပ်မထည့်တော့ဘူး။
wubi နဲ့သုံးနေပေမယ့် အောက်က guide ကိုကြည့်ပြီး applications တွေ install လုပ်ပုံကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ applications တွေရှာမယ်၊ ပြီးတော့ ဘယ်လို install လုပ်ရမယ်ဆိုတာ google လိုက်တာနဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများပြီးစီးစေပါတယ်။
အောက်ကလင့်က ubuntu 8.04 အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ကလင့်က ubuntu 8.10 အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ Repositories တွေသာ ကွဲပြားသွားတာပါ။ ကျန်တဲ့ install လုပ်ပုံရယ် applications' names တွေရယ် အားလုံးနီးပါးတူပါတယ်။
သတိ။ ။ အဲဒီ guides တွေထဲက sources.list က repositories တွေအားလုံးကို ကူးတည့်ရန်မလိုပါ။ တကယ်လိုအပ်တဲ့ repository ကိုသာသွင်းပါရန်။
ပြသာနာတက်လာပြီဆိုရင် ချက်ချင်း google လိုက်ပါ။ ဥပမာ "Genius Webcam desn't work on ubuntu 8.10" ဒါမှမဟုတ် "howto install vlc on ubuntu 8.04" စသည်ဖြင့်ပေါ့။ google က သိတဲ့အတိုင်း စက္ကန့်အတွင်းမှာ ထောင်ပေါင်းရာကျော်ရှိတဲ့ answers တွေကိုချက်ချင်းပြန်ပေးမှာပါ။ ကိုယ့်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဟာတွေကိုရွေးဖတ်ပြီး ပြသာနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ခုမှစလို့ ဘာမှမတက်သေးရင် စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ခုမှစတာပဲလို့ သဘောထားပြီး ဆက်လုပ်ပါ။ ကျနော်ဆိုလဲ အရင်ကဘာမှမသိခဲ့ရာကနေ ခုမှနည်းနည်းသိလာတာပါ။ တူတူပါပဲ။ ကျနော်လဲလေ့လာဆဲပါ။ beginner တစ်ယောက်ပါပဲ။ Linux ခရီးအတွက် ubuntu က အကောင်းဆုံးနဲ့ ပထမဆုံးခြေလှမ်း တစ်ခုပါ။ :67:
နောက်တစ်ခုက wubi ကို uninstall လုပ်ရတာတော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်။ ဒီအောက်ကလင့်လေးမှာ သွားပြီးဖတ်ပါခင်ဗျာ။
ကိုbox02 ခင်ဗျာ.. အခုလိုဂရုတစိုက်ဖြေပေးတာကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့error box ကိုလည်းအကြီးလုပ်ပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖြေပေးကြပါအုန်းခင်ဗျာ...:77::77::77:
ကို spaceboy က Hard disk တစ်ခုလုံးမှာ Install လုပ်တာလား ဒါမှမဟုတ် Windows နဲ့ dual boot လုပ်တာလား။ Partition ခွဲမယ်မေးတုန်းက ဘာ option ကိုရွေးလိုက်တာလဲ။
ဖြစ်နိုင်တာက သူ့အတွက် partition က မလုံလောက်လို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။
:D:D ဟီးးးးး ကိုbox02 အနော်က အခုမှ စပြီးစမ်းသုံးမဲ ့user ပါ။ သီးသန် ့ကြီးလည်း Linux ကို install မလုပ်ချင်တာနဲ ့... Microsoft virtual PC ကိုသုံးပြီး Linux ကိုစမ်းတင်ကြည့်နေတာပါ။ အခုထိတော့အစင်မပြေသေးပါ။ ကျွန်တော်သုံးတဲ ့ခွေက Fedora Linux Core 1 ( redhat Linux 10 ) ပါ။ အစင်မပြေသေးပါ။ Linux ကို သီးသန့်install လုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ... အစင်မပြေသေးပါ။ ကိုbox02 ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ :77::77::77: အခြား အကိုအမများလည်း ၀င်ရောက်၍ အကြံဉာဏ်ပေးကြပါအုန်းနော်...:101::101::101:
Fedora 10 ဒါမှမဟုတ်9သုံးပါလား။ 10 ကတော့ ကျွန်တော့်မှာ CD ပဲရှိတော့ package တွေကို online ၇ိှမှ သွင်းလို့ရလိမ့်မယ်။
ဟီးးးးး ကိုbox02 အနော်က အခုမှ စပြီးစမ်းသုံးမဲ ့user ပါ။ သီးသန် ့ကြီးလည်း Linux ကို install မလုပ်ချင်တာနဲ ့... Microsoft virtual PC ကိုသုံးပြီး Linux ကိုစမ်းတင်ကြည့်နေတာပါ။ အခုထိတော့အစင်မပြေသေးပါ။ ကျွန်တော်သုံးတဲ ့ခွေက Fedora Linux Core 1 ( redhat Linux 10 ) ပါ။ အစင်မပြေသေးပါ။ Linux ကို သီးသန့်install လုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ... အစင်မပြေသေးပါ။ ကိုbox02 ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ :77::77::77: အခြား အကိုအမများလည်း ၀င်ရောက်၍ အကြံဉာဏ်ပေးကြပါအုန်းနော်...
လင်းနစ်ကို စသုံးမယ်ဆိုရင် Ubuntu ကို သုံးပါလား...
သူက Fedora ထက် ပိုလွယ်ပါတယ်။ အင်စရောလုပ်ရတာလည်း မခက်ဘူး။
ဟုတ်တယ်။ ubuntu မှာ wubi ပါတယ်လေ။ အဲဒါလေးက windows မှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ harddisk သီးသန့် partition ့ိပိုင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူး။ မကြိုက်ရင်လည်း uninstall ချလို့ရတယ်။
:D:D ဟီးးးးး ကိုbox02 အနော်က အခုမှ စပြီးစမ်းသုံးမဲ ့user ပါ။ သီးသန် ့ကြီးလည်း Linux ကို install မလုပ်ချင်တာနဲ ့... Microsoft virtual PC ကိုသုံးပြီး Linux ကိုစမ်းတင်ကြည့်နေတာပါ။ အခုထိတော့အစင်မပြေသေးပါ။ ကျွန်တော်သုံးတဲ ့ခွေက Fedora Linux Core 1 ( redhat Linux 10 ) ပါ။ အစင်မပြေသေးပါ။ Linux ကို သီးသန့်install လုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ... အစင်မပြေသေးပါ။ ကိုbox02 ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ :77::77::77: အခြား အကိုအမများလည်း ၀င်ရောက်၍ အကြံဉာဏ်ပေးကြပါအုန်းနော်...
rehat9တော့သုံးတယ်။ Fedora9လည်းတင်ပြီးသုံးကြည့်တာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း Virtual Machine ဘဲ သုံးတာပဲ အဆင်ပြေတယ်။ Microsoft Virtual PC 2004 နဲ့ VMWare Workstation6ကို သုံးတာပါ။ Virtual Drive အနေနဲ့ တော့ Farstone Virtual Drive Pro 11.5 ကိုသုံးတယ်။ Mircrosoft Virtual PC 2007 နဲ့ တော့ မတင်ဖူးသေးဘူး။ VMWare ကို ပိုပြီး သဘောကျပါတယ်။ Virtualization ကိုသုံးရင် CPU မြင့်မြင့် နဲ့ Memory က အနည်းဆုံး 512M (or) 1G တော့လိုတယ်နော်။:5:
VMWare ကို မသုံးဖူးသေးရင်လည်းသုံး ကြည့်ပါလား။ Virtual PC နဲ့ ယှဉ်ပြီး သုံးကြည့် VMWare ကိုပိုပြီး ကြိုက်လာလိမ့်မယ်။ Virtual PC လောက်တော့ မရှင်းဘူးပေါ့....။(သုံးရလွယ်ကူတာ)
ဒါနဲ့ RedHat ကို Install လုပ်တုန်းက Installation CD ကို Test လုပ်မလားလို့မေးရင် လုပ်ကြည့်အုန်းနော် CD Error လည်းဖြစ်နေအုန်းမယ်......:D
ဒါက အကြံပေးတာနော် ..... ဆက်ဆွေးနွေးပေးကြပါ......:D
I am really interested in that. Can i use ubuntu with my window xp sp3. mine is traditional Chinese version. Please reply me.
ကိုIstein .. ubuntu ကို windows xp နဲ့ရော vista နဲ့ပါတွဲသုံးလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန် dual boot နည်းနဲ့ install လုပ်ရင်လုပ် ဒါမှမဟုတ် wubi (ubuntu window installer) နဲ့ windows partition ထဲမှာကို install လုပ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီ wubi နည်းနဲ့ဆိုရင် hdd partition မခွဲပေးပဲနဲ့ windows partition တစ်ခုထဲမှာပဲ သူကရှိနေတာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် သာမန် windows application တစ်ခုလိုမျိုး ရှိနေတဲ့သဘောပေါ့။ Installation မှာလဲ ဘာသာစကားကို ရွေးလို့ရပါတယ်။ Chiness ဘာသာစကားနှစ်မျိုးရွေးခွင့်ပေးထားလား တော့မသိဘူး၊ ကျနော် တရုတ်စကားမပြောလို့ မသိပါဘူး။
Installation ပြီးလို့ reboot လုပ်တဲ့အခါ boot menu ကနေပြီးတော့ ubuntu လား windows လားရွေးပြီး ၀င်လို့ရပါတယ်။
ခု ubuntu နောက်ဆုံး version 8.10 cd မှာလဲ wubi ပါပါတယ်။ ubuntu site မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။